China P&M nyanzvi yemhando yepamusoro epurasitiki chigadzirwa mold mugadziri Gadzira uye Fekitori |P&M
P&M nyanzvi yemhando yepamusoro yepurasitiki chigadzirwa mold mugadziri
Mold material P20,2738,2344,718,718H,S136,8407,NAK80,SKD61,H13
nguva yekugadzira 5 mazuva ekushanda
Isu tinogona kupa imwe-kumira sevhisi, inogona kugadzira mold yaunoda, ndapota nditumire iyo dhizaini,
Ndichakupa kotesheni yakakodzera, uye kukupa basa riri nani.
Ndapota taura newes!
Isu tinokwanisa kupa ese epasi rese ekutaura nzira dzekutumira, uye sarudza akakodzera uye
yakanakira nzira yekuendesa yekutaura zvinoenderana nenguva yako.
Kazhinji molds inotumirwa negungwa, uye zvigadzirwa zvinosarudzwa maererano nenguva inodiwa.
Q1: Uri kutengesa kambani kana mugadziri?A: Isu tiri mugadziri uye tine 2 pachedu mafekitori.
Q2.Ndingawana riini quotation?A: Isu tinowanzo tora mukati memazuva maviri mushure mekunge tawana kubvunza kwako.Kana iwe uchikurumidzira, ndapota tifonere kana kutiudza mune yako email kuitira kuti titange kutora yako.
Q3.Inguva yakadii yekutungamira-nguva yekuumbwa?A: Izvo zvese zvinoenderana nehukuru hwezvigadzirwa uye kuoma kunzwisisa.Kazhinji, nguva yekufambisa mazuva makumi maviri nemashanu.
Q4.Ini handina 3D kudhirowa, ndoitanga sei chirongwa chitsva?A: Unogona kutipa sampuli yekuumba, isu tichakubatsira iwe kupedzisa 3D yekudhirowa dhizaini uye dhizaini.
Q5.Usati watumirwa, ungave sei nechokwadi chekuti zvigadzirwa zvemhando?A: Kana iwe ukasauya kufekitori yedu uye zvakare usina wechitatu bato kuti aongororwe, isu tichava sewe wako mushandi wekuongorora.Isu tichakupa iwe vhidhiyo yekugadzirwa kwemaitiro rondedzero inosanganisira process report, zvigadzirwa saizi chimiro uye pamusoro peruzivo, kurongedza ruzivo uye zvichingodaro.
Q6.Mitemo yako yekubhadhara ndeipi?A: Mold Payment: 40% dhipoziti neT/T pachine nguva, 30% yechipiri mold kubhadhara usati watumira yekutanga miedzo samples, 30% mold chiyero mushure mekunge mabvumirana masampuli ekupedzisira.B: Kubhadhara Kubhadhara: 50% dhipoziti pachine nguva, 50% isati yatumira zvinhu zvekupedzisira.
Q7: Iwe unoita sei bhizinesi redu kwenguva refu uye hukama hwakanaka?A:1.Isu tinochengeta mhando yakanaka uye mutengo wemakwikwi kuti tive nechokwadi chekuti vatengi vedu vanobatsirwa kune zvemhando yepamusoro zvigadzirwa.2. Tinoremekedza mutengi wese seshamwari yedu uye tinoita bhizinesi nemwoyo wose uye tinoita shamwari navo, pasinei nokuti vanobva kupi.
Zvakapfuura: P&M inyanzvi mugadziri wemhando dzakasiyana dzezvigadzirwa zvepurasitiki
Zvinotevera: P&M nyanzvi customizable mold kugadzira fekitori
P&M inyanzvi mugadziri weakasiyana...
Plastiki bhokisi, magirazi furemu, chokoreti bhokisi, plas...